Waa maxay sababta fariimaha bulshadu u tahay furaha buundada CSAT ee aan la jabin karin | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/Waa maxay sababta Farriinta Bulshadu ay fure u tahay Dhibcaha CSAT ee Aan La Guulaysan karin
Waa maxay sababta Farriinta Bulshadu ay fure u tahay Dhibcaha CSAT ee Aan La Guulaysan karin
Noocyada leh macaamiil aan faraxsanayn ma sii raagayaan waqti dheer.
Aragtida macaamiishaada ee shirkaddaadu waxay saamaysaa wax kasta laga bilaabo sumcadda sumadda iyo daacadnimada macmiilka ilaa meesha ugu hoosaysa. Haddii ay faraxsan yihiin, samee wax badan oo iyaga ka dhigaya inay sidaas dareemaan. Oo haddii aysan ahayn, waxa fiicnaan lahayd inaad barato sababta oo aad wax uga qabato—dhakhso ah.
Taasi waa sababta cabbirida iyo ka warbixinta ku qanacsanaanta macmiilka (CSAT) ay tahay waajib. Waa halbeeg muhiim ah oo aad u isticmaali karto si aad u ogaato isbeddelada iyo isbeddellada ku qanacsanaanta macaamiishaada guud ahaan alaabtaada iyo adeegyadaada taas oo qayb ka ah la socodka caafimaadka guud ee astaantaada.
CSAT waxaa inta badan adeegsada adeegga macaamiisha iyo kooxaha taageerada si ay u cabbiraan sida wanaagsan ee ay uga jawaabayaan su'aalaha iyo xallinta arrimaha.
Laakin marka isdhexgalkaas uu sii kordho u guuro warbaahinta bulshada, waxaa muhiim u ah kooxdaada suuqgeyntu inay sidoo kale fiiro gaar ah u yeelato.
Noocyo badan ayaa ku cabbira qanacsanaanta macaamilka qaabkooda ugu fudud iyagoo isticmaalaya sahan CSAT - sahamin hal su'aal ah oo fudud oo waydiisa macmiilka inuu ku qiimeeyo ku qanacsanaanta alaabtaada ama adeeggaaga hal ilaa 10.
Iyadoo sahanka CSAT uu ku siinayo sawir ku qanacsanaanta macaamilka wakhti gaar ah (sida iibsashada ama wicitaanka taageerada ka dib), dhibco kasta oo macmiil ah waxay u badan tahay inuu isbeddelo muddada xiriirka ay la leeyihiin astaantaada.
Taasi waa sababta noocyada smart ay ugu dadaalaan in ka badan kaliya dhibcaha sare ee sahanka CSAT - waxay rabaan inay xiriir shucuur ah la sameeyaan macaamiisha.
Macaamiisha shucuurtoodu ku hawlan tahay urur waxay u badan tahay inay ku taliyaan badeecadeeda ama adeeggeeda, waxay u badan tahay inay mar kale iibsadaan, oo aad uga qiimo yar kuwa aan ahayn, sida lagu sheegay daraasad ka soo baxday Harvard Business Review.
Hal dariiqo oo wax ku ool ah oo lagu dhisayo xiriir shucuur togan oo macaamiisha ah? Fariimaha bulshada Adigoo siinaya daryeelka bulshada kanaalada ay macaamiishu door bidaan, waxaad u fududayn doontaa si dhakhso leh oo fudud inay u helaan caawinta iyo jawaabaha ay u baahan yihiin.
Aynu eegno shan ka mid ah siyaabaha ugu sarreeya fariimaha bulsheed waxay ka caawiyaan summadaha inay la xiriiraan macaamiisha si ay u horumariyaan qanacsanaanta macaamiisha.
Bonus: Soo dejiso bilaashkayaga WhatsApp ee loogu talagalay daryeelka macaamiisha hanuuniyo si aad u hesho tilmaamo badan oo ku saabsan sida loo isticmaalo Ganacsiga WhatsApp si aad u hesho heerar beddelaad sare leh, khibrad macmiil oo wanaagsan, kharashyo hoose, iyo qanacsanaanta macaamiisha sare.
1. La kulan macaamiisha si ku habboon, kanaalada gaarka ah
Si aad u soo gudbiso waayo-aragnimada macmiilka oo aad u wanaajiso qanacsanaanta macaamilka, waxaad u baahan tahay inaad ku xidho macaamiisha goobihii ay horeba u yaqaaneen - warbaahinta bulshada, barnaamijyada fariimaha bulshada, iyo kanaalada kale ee dhijitaalka ah.
Gartner waxa uu saadaaliyay in 60% dhammaan ka qaybgalka adeegga macaamiisha lagu gaarsiin doono kanaalada dhijitaalka ah sida fariimaha bulshada marka la gaaro 2023.
In kasta oo ay wali macno samaynayso in la bixiyo taageerada taleefanka-taasoo dad badani wali door bidaan is dhexgalka kakan, sababaha gelitaanka, ama doorbidida shakhsi ahaaneed - tiro sii kordheysa oo dad ah ayaa u jeestay kanaalada dhijitaalka ah xawaaraha iyo ku habboonaanta ay bixiyaan.
Barnaamijyada bulsheed iyo fariimaha ayaa u oggolaanaya dadka inay ka boodaan geedka taleefanka ee laga baqo ("taageerada macaamiisha, riix 12!") Oo waxay qabtaan muusik ("dhagaxa-dhagaxa-dhagaxa ugu weyn ee '70s iyo 80s!") si ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin si degdeg ah si waxay heli karaan maalintooda. Buugaagta dadka intooda badan, taasi waa waayo-aragnimo macaamiil aad u fiican.
Si aad si habsami leh uga gudubto taleefanka una aado fariimaha bulshada waxaad siin kartaa macaamiishaada waddo ay kaga baxaan safka haynta oo aad wanaajiso khibradooda ku aaddan jawaabta codka is-dhexgalka ee wada sheekaysiga (IVR) ama 'call leexashada'. Waxay siinaysaa ikhtiyaarka ah inay ka beddelaan adeegga taleefanka una beddelaan adeegga fariimaha.
2. U adeega macaamiisha shuruudahooda
Waydii qof wakhtiga qadada ku qaatay haynta adeega haddii uu ku qanacsan yahay waayo-aragnimada, waxaadna u badan tahay inaad hesho dhego.
Fariimaha bulshada, looma baahna in macaamiishaada lagu xidho 9-ilaa-5 daaqad adeeg ama lagu xidho wakhtiyo dheer oo sugitaan ah. Waxay kuu soo diri karaan waqtigooda -inta ay qaadanayaan soo wac, ay sugaan tareenka, ay socdaan eeygooda, ama ay qaadanayaan, ahem, nasasho akhris oo la fidiyey.
Adigoo awood u siinaya adeegga macaamiisha fariimaha, waxaad ka badbaadin doontaa macaamiisha inay dareemaan inay luminayaan waqtigooda qaaliga ah, sababtoo ah waxay awoodaan inay qabtaan hawlo badan oo ay soo qaadaan wadahadalka marka ay ku habboon yihiin. Farriinta bulshadu waxay macaamiisha dib ugu celisaa kontoroolka -meesha ay tahay inay ahaato - waxayna caawisaa kor u qaadida qanacsanaanta.
WhatsApp waxa uu noqday kanaal aad caan u ah adeegga macaamiisha ee dhanka fariimaha.
AXA, oo ah shirkaddii ugu horreysay ee caymiska iyo bixiyaha gargaarka waddooyinka ee Belgium si ay ugu adeegsato adeegga macaamiisha WhatsApp, hadda waxay ku faantaa natiijada qanacsanaanta macaamiisha 4.5 marka loo eego 5 macaamiisha loogu adeego kanaalka.
3. Ha ka dhigin macaamiishu inay dib isu soo celiyaan
Daraasad dhowaan la sameeyay, saddex-meelood meel ka mid ah jawaab-bixiyeyaasha ayaa sheegay in waxa ay u arkaan inay ugu xanaaqsan yihiin ka-qaybgalka adeegga macaamiisha ay tahay baahida loo qabo inay naftooda ku celiyaan wakiillo taageero oo badan.
Xogtu waa inay raacdaa macmiilkaaga meel kasta oo ay tagaan si ay uga badbaadiyaan ku celcelintan niyad jabka leh. Haddi ay kula xidhiidhayaan wakiilka iibka iimaylka, la macaamilka maamulaha warbaahinta bulshada ee Twitter, ama ku xidhidhiyaha wakiilka daryeelka macaamiisha iyada oo loo marayo WhatsApp, macaamiishu waxay arkaan hal calaamad oo keliya.
Si aad u bixiso daryeelka omnichannel ee waxtarka leh, waxaa muhiim ah inaad qabsato xogta muhiimka ah goob kasta oo macaamiisha ah oo aad ku qalabayso wakiil kasta macluumaadka ay u baahan yihiin si ay ula xiriiraan si hufan.
Adiga oo ku daraya xogta macmiilka ee boostadaada fariimaha, waxaad hagaajin kartaa waayo-aragnimada murugsan oo aad gaadhsiin kartaa adeeg macaamiil oo weyn-looma baahna ku celcelin.
4. Bixinta adeegga macaamiisha gaarka ah
Mid ka mid ah fursadaha ugu wanaagsan ee fariimaha bulshadu ay bixiso summadaha ayaa ah awoodda lagu dhex geliyo xogta macaamiisha goobta fariimaha si ay macaamiisha ula yeeshaan-xitaa miisaan ahaan.
Adiga oo ku daraya warbaahintaada bulshada iyo xogta fariimaha ee maamulka xidhiidhka macaamiisha (CRM), waxaad u abuuri kartaa khibrad fiican macaamiishaada iyo socodka shaqada ee fudud ee kooxahaaga.
Iyo adoo ku daraya automation ka-qaybgalkaaga iyo qulqulka shaqada adeegga macaamiisha qaab bots farimo ah si aad wax uga qabato su'aalaha soo noqnoqda ee macaamiisha, waxaad u maareyn kartaa weydiimaha soo noqnoqda si ka dhakhso badan waligaa adigoo wali gudbinaya shakhsiyaynta qiyaasta.
Macaamiishu waxay qadarin doonaan hufnaanta iyo xawaaraha jawaabta. Ku dhawaad ​​80% macaamiishu waxay yiraahdeen xawaaraha, ku habboonaanta, caawinta aqoonta, iyo adeegga saaxiibtinimo ayaa ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee khibradda macaamiisha togan, marka loo eego PWC.
5. Si degdeg ah u xalli arrimaha macmiilka
Fariintu waxay siisaa fursad lagu xalliyo mashaakilaadka degdega ah—guul-guul ee macaamiisha iyo wakiilada adeega mashquulka ah.
Barnaamijyada fariimaha waxay taageeraan macluumaadka qani ku ah warbaahinta sida codka isdhexgalka, muqaal, iyo sawiro, taas oo u sahlaysa si dhakhso leh oo sahlan wakiilada adeega labaduba inay ururiyaan oo ay gudbiyaan xogta ay u baahan yihiin si ay u xalliyaan dhibaatooyinka si degdeg ah.
Tani waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta muhiimka ah ee tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah ee daryeelka macaamiisha (KPIs) sida xallinta ugu horreysa ee xiriirka (FCR), celceliska waqtiga gacanta (AHT), iyo-muhiim u ah - qanacsanaanta macaamiisha (CSAT).
Sida ugu fiican ee xidhiidh shucuureed loogu dhiso macaamiisha waa in lala kulmo si iskood ah oo loola macaamilo isla kanaalada ay u isticmaalaan si ay ula xidhiidhaan qoyskooda iyo asxaabtooda - fariimaha bulshada.
Codso demo ee Sparkcentral by Hootsuite si aad u aragto sida aad ugu bixin karto khibrad adeeg macmiil oo gaar ah kanaal kasta oo dhijitaal ah.
Maamul su'aal kasta oo macmiil ah oo ku saabsan hal madal oo leh Sparkcentral. Waligaa fariin ha dhaafin, hagaaji qanacsanaanta macmiilka, oo wakhti badbaadi. Ficil ahaan u arag.
Kala hadal annaga
Suuqgeeyayaasha Iimaylku waa inay si fiican u yaqaaniin macaamiisha
Sida Loo Muujiyo Boqolkiiba Battery ee Taleefannada Samsung